Happy Birthday To Me…… :D - Ddus Gajurel Blogs
on Saturday, November 14, 2009 in अनुभब
Life is Always today.You can do everything beginning is always today. Time wait for you please do something…….
ढक !! ढक !!!, ढक !!!! ढक !!!!,
मस्त निद्रमा भएको बेला कसैले ढोका ढकढकायो
फेरी “टुडु टुडु टुडु टुडु ”
मोबाइलको घण्टी पनि बज्न थाल्यो । कसले गरेछ भनेर एक पल्ट हेरे तर निद्रामा भएको कारण मज्जाले नाम नै देखीएन । को रहेछ भनेर भनेर ढोका खोल्दा साथी रहेछ ढोका ढकढकाउने ।
“अबे कित्ने देर तक सोएगा , जल्दी उठ खाना खाने जानेका हे” , ढोका खोल्ने बित्तीकै उसले भन्यो । म चुपचाप फेरी गएर सुते । उसले कम्पुटर खोल्यो अनि भन्यो
“फेरी जल्दी कर २ बज चुके हे, दिनका या रातका मैले तुरून्तै सोधे” ।
“दिनका उसले उत्तर दियो” ।
म निद्रैमा नुहाउन गए । नुहाएर कोठामा फर्कदा उसले “Happy Birthday” भन्यो म झसंग भए ।
“तेरेको केसे पता चला कि मेरा Birthday हे आज” । मैले पनि तुरून्तै सोधे “फेसबुक मे तेरा Birthday बोल कर आया हे ” उसले उत्तर दियो ।
साच्चै आज मेरो Birthday हो त ??? आँफैसंग प्रश्न गरे । सयद म एकोहोरीन थाले । हैन मैले अहीले सम्म के के गरे ??? खोइ मेरो प्रगती बिबरण ?????? सोचदै थिए एकोहोरो भएर साथिले प्रश्न तेर्सायो सरल तर जटील , “Birthday Party ?? ”
म निशब्द भए । खै के को पार्टी म त जन्मेकै छुइन जस्तो लाग्यो । सायद म कक्षा ९ मा पढ्दाको कुरो हो , सरले भन्नु भएको मेरो कानमा अझै गुन्जी रहेको छ । मानीसको ज्न्म दुइ पटक हुन्छ । हामी त जन्मेका नै छैनैँ । एक पटक आमाको कोखबाट जन्म लिन्छैँ र अर्को संसार सामु जन्म लिन्छै । अब्रहम लिङकन, मेडम किउरी, मलर टेरेसा, महात्मा गान्धी, भानुभक्त आचाय, लक्ष्मी प्रसाद देबकोटा , …………………….. यिनिहरूको नाम लिनुभएको थियो सर ले संसारमा जन्म लिइ सकेका ब्यक्तीहरू । धेरै सोचे तर चित्तै बुझेन ।
भोक भोक लाग्न थाल्यो अनि जुन दिन संसार सामु चिनिन्छु त्यही दिन म संसारभरी भएका ब्यक्तीहरू लाइ खाना, बास र कपासको ब्यबस्था साथमा मेरो जिबनको सबैभन्दा ठुलो जन्म दिन मनाउने छु
र मनमनै Happy Birthday To Me भन्दै खाना खान लागे,
Basanta November 14, 2009 at 5:36 AM
जन्मदिनको उपलक्षमा अझ प्रगति, सुख र शान्तिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
Unknown November 14, 2009 at 9:43 AM
जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!
Unknown November 14, 2009 at 10:13 AM
जन्मदिनको शुभकामना त छँदै छ । यसालाको पोष्ट पनि निक्कै रमाईलो लाग्यो ।
Nepaliko Aawaz November 14, 2009 at 10:20 AM
रमेश केसी November 15, 2009 at 12:03 PM
त्यो आउने ग्रेट जनम दीन को ग्रेट बधाई फेरी दिउला। अहिलेलाई पहिलो जनम पछीको आधा जन्म दीन को धेरै धेरै शुभ कामना छ है
प्रवेश November 15, 2009 at 9:42 PM
जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना !!
आश्मा November 16, 2009 at 9:59 AM
मेरो तर्फबाट पनि जन्मदिनको शुभकामना :)
SADEEP SUMAN November 24, 2009 at 9:22 PM
ramro lekhnu bhaeko chha umesh jee..
Shiva Prakash December 2, 2009 at 6:16 PM
यहाँले नमनाए पनि यहाँको जन्मदिनलाइ शुभकामाना ।
Shiva Prakash December 2, 2009 at 6:29 PM
अर्को कुरा, तपाइँको ब्लग अति राम्रो लाग्यो, मलाइ पनि सहयोग गर्नु हुन्छ कि ?
Unknown December 5, 2009 at 4:27 PM
दूर्जेय चेतना December 10, 2009 at 9:13 PM
जन्म दिनको शुभकामना मेरो पनि
HAWA December 14, 2009 at 2:33 PM
ठुलो र प्रसिद्ध हैन असल मान्छे हुने प्रयास गर बाबु... ह्यापी बडे
Anonymous March 23, 2010 at 1:55 AM
janma dinko shubhakamana ....dhilai bhae ni ...